I Pekahia na Faseia dia mpanjakan'i Israely nandritra ny roa taona teo antenantenan'ny taonjato faha-8 tal. J.K. - zanaka nandimby ny mpanjaka Menahema. Nandimby an-drainy tao Samaria i Pekahia. Nandova hatrany ny fivavahan'i Jeroboama I izy tamin'ny fanompoan-tsampy. Nanjaka tamin'ny taona 738 hatramin'ny 737 i Pekahia araka an'i William F. Albright fa tamin'ny taona 742 hatramin'ny 740 kosa araka an'i Edwin R. Thiele.
Novonoin'ny iray amin'ireo mpitari-tafiny, dia i Peka zanak'i Remalia, tao an-dapany izy, niaraka tamin'ny lehilahy miisa 50 avy any Gileada (na Galaada). Nisolo azy taorian'izany famonoana izany i Peka (na Fasea).
Amin'ny teny hebreo dia atao hoe פקחיה‎ / Pəqaḥyāh izy fa amin'ny teny latina kosa dia Phaceia.
Mpanjakan'i Israely[hanova | hanova ny fango]Modifier
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pekahia&oldid=974549"
Dernière modification le 8 Septambra 2019, à 14:32
Voaova farany tamin'ny 8 Septambra 2019 amin'ny 14:32 ity pejy ity.